Nanangana ny Indian Observatory tao amin'ny GeoSmart India - Geofumadas ny FES
Desambra, 2019 jeospatial - GIS, fanavaozana
(LR) Lieutenant Girish Kumar, Mpanadihady ankapobeny any India, Usha Thorat, Filohan'ny Birao Governora, FES ary lefitra lefitra teo aloha avy amin'ny Bankin'ny Reserve Reserve of India, Dorine Burmanje, Co-Président, Global Management Geospatial Firenena Mikambana (UN-GGIM) sy Jagdeesh Rao, Tale Jeneraly, FES, nandritra ny fandefasana ny Observatory Indiana tany amin'ny GeoSmart India Conference tao Hyderabad ny talata.
Sokafana ny angon-drakitra hanaraha-maso ny tontolo iainana, ny fananganana ny fiaraha-monina
Ny Foundation for Ecological Security (FES), ONG miasa amin'ny fikajiana ny ala, ny tany sy ny loharanon-karena any amin'ny toerany, dia namoaka ny sehatry ny data misokatra antsoina hoe ny Observatory of India tamin'ny andro voalohany tamin'ny fihaonambe GeoSmart India, Talata.
Lt Girish Kumar, Mpanolotsaina jeneraly ao India, Usha Thorat, Filohan'ny Birao Governora, FES ary lefitra lefitra teo aloha avy amin'ny Bankin'ny Reserve, India, Dorine Burmanje, Co-Président avy amin'ny Firenena Mikambana momba ny Geospatial Information Management (UN -GGIM) nanatrika tao amin'io fotoana io.
Ny Observatory of India dia manangona antontan-drakitra mihoatra ny 1,600 11 mihoatra ny salan'isa momba ny lafiny sosialy, ekonomika ary ekolojia amin'ny toerana iray. Afaka malalaka amin'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena, ny mpianatra, ny departemantan'ny governemanta ary ny olom-pirenena, ary misy koa ny fitaovana teknolojia XNUMX izay manampy amin'ny fahazoana ny fanjakana sy manao drafitra ny fitsabahana mba hitehirizana ny ala, manavao ny loharanon-drano ary hanatsara ny fivelomana ao amin'ny vondron'olona .
Ireo fitaovana ireo dia afaka miasa any ivelany amin'ny finday ary afaka ampiasaina amin'ny fiteny eo an-toerana miaraka amin'ny fandikana ireo kaody ary afaka ampiasain'ny olona semi-literatiora aza. Ohatra, ny Composite Landscape Assessment and Restoration Tool, na CLART, dia manampy hamantatra ireo faritra tsara indrindra ho an'ny fanodinana rano anaty rano eo ambanin'ny tetika MGNREGA. Ny GEET, na GIS Rights Tracking System, dia mamorona ny saina momba ny zon'ny vondrom-piarahamonina marginal amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fahazoan-dàlana amin'ny tokantrano. Toy izany koa ny boaty Integrated Management Management box, na IFMT, dia misy fitaovana manampy ireo fanangonana sy famakafakana ireo data ary manampy ireo sampan-draharahan'ny ala izay manomana drafi-piasana maharitra.
Mandritra ny lanjan'ny fanombohana dia hoy i Jagdeesh Rao, Tale Jeneralin'ny FES: «Ny fiasa amin'ny olana momba ny ala, ny tany sy ny rano dia mila fijerena, satria miitatra manerana ny sisin'olombelona sy ny fijerin'ny fahalalahan-tsaina izany. fitehirizana ireo karazana atahorana tandindomin-doza, fitehirizana ny harena toy ny rano sy ny biomass ary ny fitrandrahana ny harena ho an'ny filan'ny olombelona. Ny sarin'ny satelita dia manome fomba fijery tsara kokoa noho ny mason'ny vorona. Matetika, misy angon-drakitra, algorithm sy fitaovana maro be dia be amin'ny fikambanana isan-karazany, saingy tsy azo vonoina amin'ny matihanina sy ny olona tsirairay, indrindra amin'ny fomba tsy azo itokisana. Amin'ny alàlan'io fandraisana an-tsaina io dia tsy fanampiana ireo mpanao politika sy mpitantana ihany ny FES amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara, fa koa mampiofana ny olona any amin'ireo tanàna sy faritra lavitra hananganana hoavy mamirapiratra » .
"Tsy maintsy ilaina ny fampandrosoana maharitra sy fampidirana ary ny teknolojia maoderina dia misy anjara lehibe amin'izany. Fampandrosoana maharitra dia midika zavatra samihafa amin'ny olona samy hafa, saingy raha ny tena izy, dia manandrana mampifanaraka ny filàna samihafa ary mamorona vahaolana maharitra maharitra, "hoy i Thorat teo aloha, ary nanantitrantitra fa amin'ny toe-paharetana maharitra dia zava-dehibe ny mahatsapa fa" raha fa ny dian'ny ekolojia an'ny mahantra dia kely, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny fahaverezan'ny biodiversity dia misy fiantraikany amin'ny mahantra mihoatra ny manankarena.
Burmanje dia nilaza: "ilaina ny fiaraha-miasa eran'izao tontolo izao amin'ny sehatry ny geospatial hamolavola ny fanavaozana, mamelona ny dinamisme. Ny vondron'olona manitatra ny tsirairay dia miteraka fiantraikany bebe kokoa amin'ny fampahalalana momba ny geospatial. Ny UNGGIM dia mitana andraikitra lehibe amin'io lafiny io, satria ekena fa ilaina ny angon-drakitra geospatial amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Zava-dehibe ny sehatry ny besinimaro ny mamerina manitsy ny tenany amin'ny tsunami data ».
Momba ny FES
Ny FES dia miasa amin'ny fiarovana ny natiora sy ny harena voajanahary amin'ny alàlan'ny hetsika iombonana ataon'ireo vondron-tanana eo an-toerana. Ny tena fototry ny ezaka ataon'ny FES dia ny fitadiavana ala sy loharanon-karena voajanahary hafa ao anatin'ireo dinamika ara-toekarena, ara-tsosialy ary ekolojika ao amin'ny tontolo ambanivohitra. Tamin'ny volana septambra 2019, ny FES dia niara-niasa tamin'ny vondron-tanàna 21,964 31 tamin'ny distrika 6.5 tamin'ny fanjakana valo, ary nanampy ny vondron-tanàna hiaro ny tany iraisan'ny 11.6 tapitrisa hekitara, anisan'izany ny fambolena, ny ala niroborobo ary ny fananan-tany Panchayat , mahomby misy olona XNUMX tapitrisa. Ny FES dia manohana ny Panchayats sy ny komity misy azy, ny komity misahana ny ala, ny komity jungle grama, ny kaomisin'ny mpampiasa rano ary ny komity misy amin'ny vilia mba hanatsarana ny fitantanana ny harena voajanahary. Na manao ahoana na manao ahoana ny firafitry ny andrim-panjakana, ny fikambanana dia miezaka amin'ny maha-mpikambana azy sy ny fidirana mitovy amin'ny vehivavy sy ny mahantra amin'ny fanapahankevitra.
Ramatoa Debkanya Dhar Vyavaharkar
Previous Post«Previous AulaGEO, tolotra ho an'ny matihanina geo injeniera indrindra
Next Post Inona no atao hoe mitokana - karazana sy fampiharanamanaraka »